'कन्डम टेस्टर' बन्दै रकुल प्रित ! - Updatekhabar.com Updatekhabar.com
‘कन्डम टेस्टर’ बन्दै रकुल प्रित !
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह एक फिल्मलाई लिएर यतिबेला निकै चर्चामा छिन्, जसको नाम हो ‘छतरीवाली’ । यो फिल्ममा उनी अहिलेसम्मकै बोल्ड भूमिकामा देखिँदैछिन् । हाल लखनऊमा छायांकन भइरहेको फिल्ममा उनी कन्डम टेस्टरको भूमिकामा छिन् । शनिवार निर्माण टिमले रकुलको फर्स्टलुक सार्वजनिक गरेको छ, जसमा उनको हातमा कन्डमको प्याकेट देख्न सकिन्छ ।
फिल्मको कहानी रकुलको चरित्र वरिपरी घुम्नेछ, जो जागिरका लागि हतारिएकी हुन्छिन् । यसैक्रममा उनी एक सिक्रेट कन्डोम टेस्टर बन्छिन् । ‘छतरीवाली’ एक विचित्र ड्रामा रहेको बताइएको छ । फिल्मको बारेमा निर्देशक तेजस देवस्कर भन्छन्, ‘फिल्मको उद्देश्य कन्डमको उपयोगलाई कलंकित गर्नु हो र हामी निकै उत्साहित छौं । रकुलको भूमिका अहिलेसम्मकै फरक रहेको छ ।’
रकुल पनि आफ्नो चरित्रलाई लिएर निकै रोमाञ्चक रहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘यो निकै दिलचस्प र फरक खालको विषय हो । केही मुद्धालाई हल्का(फुल्का तरिकाबाट उजागर गर्न महत्त्वपूर्ण र राम्रो हुन्छ र यो कुराले मलाई निकै उत्साहित बनाएको छ ।’ रकुलले पहिलो पटक सामाजिक सन्देश दिने फिल्ममा काम गरेकी हुन् । उनी चाँडै फिल्म ‘डक्टर जी’ मा पनि देखिँदैछिन् ।